Flappy Mr Bean - Online
နေအိမ် » လှုပ်ရှားမှု » Flappy Mr Bean
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Flappy Mr Bean
ဖေါ်ပြချက်: ဒီမစ္စတာ Bean ကို၏ရယ်စရာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမစ္စတာ Bean ကိုပိုက်ကျော်ပျံသန်းနှင့်လမ်းအပေါင်းတို့၌အကြွေစေ့ရကိုကူညီပေးပါတယ်။
ကစား: 28,610 tag ကို: mr bean ကို, mr bean ကိုဂိမ်း, flappy ငှက်, flappy ငှက်ဂိမ်း, flappy ငှက်ကို flash, game like flappy bird
mr bean ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ခရီး
ဒီဂိမ်းမှာတော့မစ္စတာ Bean ကိုမိကျောင်းသူ့ကိုစောင့်ဆိုင်းများစွာသောစိန်ခေါ်မှုများရှိပါတယ်ဘယ်မှာနိုင်ငံခြားနိုငျငံမြားတှငျဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ မစ္စတာ Bean ကိုဒီ adveture ဂိမ်းအားလုံးအဆင့်ဆင့်အပြီးသတ်ကူညီပါ။
တစ္ဆေမြို့အတွက် mr bean ကို
မြားစှာသောသရဲတစ္ဆေမစ္စတာ Bean ကို လိုက်. ရှိပါတယ်။ သူ့ကိုသူတို့ကိုလွတ်မြောက်ရန်ကူညီပါခြင်းနှင့်ခုန်လက်ဝဲ mouse ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လုံခြုံစွာအိမ်ပြန်သွားပါ။
mr bean ကိုသမုဒ္ဒရာထဲကိုကယ်တင်
ကွမျးကွုငါးမန်းသမုဒ္ဒရာထဲတိုက်ခိုက်ရန်။ မစ္စတာ Bean ကိုသမုဒ္ဒရာထဲကိုကာကွယ်ရန်ရေငုပ်သင်္ဘောကိုမောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, သငျသညျမစ်စတာ Bean ကိုငါးမန်းကိုဖျက်ဆီးဖို့ကူညီပေးပါ
အန္တရာယ်ရှိသောသစ်တောမှတဆင့် Flappy Bird ကိုကူညီပါခြင်း, အံ့သြဖွယ်စွန့်စားမှုဖြည့်စွက်! ပျော်ရွှင်ပါစေ!
mr bean ကိုခက်ခဲမစ်ရှင်
mr bean ကိုအပြတိုက်ကာကွယ်ကူညီပါများနှင့်အကြမ်းဖက်သမားများကိုဖကျြဆီး
ကမ်ဘာပျေါတှငျနီးပါးလူတိုင်းအံ့သြဖွယ် Flappy ဂိမ်း likes ။ တစ်ပိုက်စနစ်ကတဆင့်တစ်ဦးရှည်လျားသောလမ်းအပေါ် Dipper နှင့် Mable ထင်းရှူး - ဤအသစ် edition အတွက်သင့်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်အခြားစုံတွဲတွေ့လိမ့်မည်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ!
နယ်သာလန်နှင့်စပိန်တို့အကြားပွဲစဉ်၌, ဗန်ပါစီဒီဂိမ်းထဲမှာသင်သူ့ကိုပိုက်မှတဆင့်ပျံသန်းကူညီခြင်းနှင့်အပေါငျးတို့သ Brazuka ဘောလုံးကိုစုဆောင်းသင့်တယ်, စပိန်အမျိုးသားရေးအသင်း stunning, ပိုက်ကွန်သို့ header ကိုခဲ့သည်
flappy Gangnam စတိုင်
flappy ငှက်ကဲ့သို့အလားတူဖြစ်, PSY ကမွို့၌ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်ကူညီခြင်း, မြင့်မားရမှတ်စိန်ခေါ်! သင်သည်သင်၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။ အဘယ်သူသည်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်ရနိုင်မလဲ? လာစမ်းပါ!
Flappy Bird ကို 2048 ဟုခေါ်တွင်နာမည်ကျော်ဂိမ်းနှင့်အတူပေါင်းစည်းလျှင်ဘာဖွစျမလဲ ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့အဖြေကိုပါ!
mr bean ကိုယစ်မူးမ
မစ္စတာ Bean ကိုသူ့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရန်သင့် mouse ကိုကိုသုံးခြင်းဖြင့်အိမ်သို့လမ်းလျှောက်ကူညီပါ။
mr bean ကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး
တောအုပ်၌မစ္စတာ bean ကိုစွန့်စားမှု, သူ့မစ်ရှင်ဤမျှလောက်များစွာသောတိရစ္ဆာန်များနှင့်အပင်ကိုလမျး၌ရှိပါတယ်ဖြစ်သောကြောင့်သတိပြုရကြမည်, အောင်မြင်သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကယ်တင်ရန်သူ့ကို p ဖမ်းမိထားရာကြိုးလွှဲကိုကူညီ
ရွှေဖရုံသီးအပေါ် mr bean ကိုခုန်
ဒီရယ်စရာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မစ္စတာ Bean ကိုဖရုံသီးပေါ်သို့ခုန်အားဖြင့်ပျံသန်းကိုကူညီပါပြပ်လိမ့်မည်သင်ဖရုံသီးသို့ခုန်ကြဘူးလျှင်, မြင့်မားသငျသညျ, ပိုပြီးမှတ်ခုန်။
mr bean ကို: ဆံပင် Saloon အတွက်ဒုက္ခ
သင်သည်သင်၏နှိုင်းယှဉ်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်ဒီဂိမ်းထဲမှာဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်အတွက်မစ္စတာ Bean ကို Trouble နှင့်အတူသင်၏မေတ္တာကုန်သွယ်မှု
mr bean ကိုလမ်းကိတ်မုန့်
မစ္စတာ Bean ကိုလမ်းတစ်လမ်း Bakery ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ ဘူးသီးကိုမြည်းစမ်းလူတိုင်းသူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့, အံ့သြစရာလည်းမရှိရရှိနိုင်ပါစားနပ်ရိက္ခာ။ ကြောင့်ဒီငှါ, ဖောက်သည်များနေ့တိုးပွားလာလျက်ရှိသည်, သူစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားလာဖောက်သည်စောင့်ရှောက်ဖို့တစ်ဦးကူညီခြင်းလက်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်မစ္စတာ Bea ကူညီ